ယူနက်စကို အသိအမှတ်ပြု အမ္မာဒါဘတ်မြို့ရှိ အိန္ဒိယ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများ လေထုညစ်ညမ်းမှုကြေ - Yangon Media Group
ယူနက်စကို အသိအမှတ်ပြု အမ္မာဒါဘတ်မြို့ရှိ အိန္ဒိယ ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများ လေထုညစ်ညမ်းမှုကြေ
အမ္မာဒါဘတ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရှေးဟောင်းမြို့တော် အမ္မာဒါဘတ်မြို့တွင် နှစ်ရာပေါင်းများစွာကပင်အုတ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော မုခ်ဦး၊ မုခ်ခုံးများသည် ဘတ်စ်ကားဟောင်းများ၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များမှ ထွက်ရှိသော မီးခိုးများဖြင့်သုတ်လိမ်းထားသလိုဖြစ်နေကာ မီးခိုးမှိုင်းများ စွဲထင်ပြီး ညစ်ညမ်းပေကျံနေပြီ ဖြစ်သည်ဟု အဆောက်အအုံ ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များက နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆို လိုက်သည်။
အမ္မာဒါဘတ်မြို့သည် အဆိုးရွားဆုံး သော လေထုညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး ဆက်လက်ပြီး လျစ်လျူရှုထားပါက စံထားအပ်သော ရှေးဟောင်းမြို့ကြီး တစ်မြို့အဖြစ် မှ ရွေ့လျောသွားနိုင်သည်ဟုလည်း ဆက်လက် ပြောကြားလိုက်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၆ဝဝ ကျော် သက်တမ်းရှိခဲ့သော ယင်းမြို့ကို ယူနက်စကို အဖွဲ့ကြီးက ဇူလိုင်လအတွင်းက ကမ္ဘာ့ယဉ် ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခဲ့သည်။
အမ္မာဒါဘတ်မြို့သည် ဒဏ္ဍာရီဆန်သော ကျောက်အုတ်များဖြင့် ၁၆ ရာစုနှစ်ကပင် တည်ဆောက်ထားသော ဘာဒရာခံတပ်ကြီးအား စီးမိုးမြင်တွေ့နေရပြီး ဟိန္ဒူနှင့် မူဆလင်ဘာသာရေးအငွေ့အသက်များ ရောနှောနေ သည့်ယဉ်ကျေးမှုကို ခံစားနေရသော အိန္ဒိယ ရှေးဟောင်းမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မြို့ကြီး အတွင်း၌ အပြောက်အမွမ်းများ ခြယ်သထား သော သစ်သားအိမ်အိုကြီးများကို ခေတ်သစ်လက်ရာ အဆောက်အအုံများအကြားတွင် တွေ့ မြင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းမြို့ကြီးသည် ယခုအခါ မြူခိုး၊ မီးခိုးများ၏ ဝါးမျိုခြင်းအား ကာလအတန်ကြာကပင်ခံစားနေရပြီ ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်များ၊ မြို့ပြစရိုက်များ၏ သားကောင်အ ဖြစ်ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်၍ ကယ်တင်ရန် အလျင်အမြန်လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ အမ္မာဒါဘတ်မြို့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရေးကော်မတီကို လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်ကပင် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီး ယင်းကော်မတီစာရင်းအရ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် သတ်မှတ်ထိုက်သော အဆောက်အအုံ ၃ဝဝဝ ခန့်ရှိကြောင်း ယူနက်စကိုအဖွဲ့ကြီးသို့ စာရင်းတင်သွင်းထားခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံဖြင့် ငွေစက္ကူရိုက်နှိပ်ရေး တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက ကန့်?
ပြင်သစ်မြောက်ပိုင်း အကျဉ်းထောင် တစ်ခုအတွင်း ထောင်သားများ ဆူပူ၊ ထောင်ဝါဒါနှစ်ဦး အရိုက်ခံ??
မန်စီးတီးနှင့်ပွဲတွင်ဆာလက်၊ ဖာမီနိုတို့ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိကြောင်း ကလော့ပ် ပြောကြား